Indlu engaselunxwemeni yaseSkorponeria - I-Airbnb
Indlu engaselunxwemeni yaseSkorponeria
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTania
Indlu yethu engaselunxwemeni lolona khetho lufanelekileyo lokuzikhulula phantsi kwelanga laseGrisi ngoxolo noxolo oluya kubuyisela umphefumlo wakho. Indlu engaselwandle yaseSkorponeria ikumgangatho osezantsi kumgangatho wegadi nje amanyathelo angama-50 ukusuka elunxwemeni!!!! Ulwandle oluzaliswe yimithi yomnquma efikelela elwandle yeyona ndawo ifanelekileyo yeMeditera yokuphumla, ukuqubha, ukutshisa ilanga, ukudlala ngaphandle kwezibini kunye/okanye iintsapho.
Indlu yaseBeachfront inamanyathelo ambalwa ukusuka elunxwemeni, kwaye ngumgangatho ophantsi ozimeleyo nowahlukileyo wevilla enamagumbi amabini .Indlu erentwayo ikwinqanaba legadi kwaye inethafa elikhokelela kuyo .Ping pong table that ilinde ukucela umngeni kuwe, kunye nekhitshi ebanzi enazo zonke izinto eziluncedo ukwenza ukuhlala kwakho kube lula. Ibarbecue yokusetyenziswa, iNetflix TV, kunye ne-intanethi ye-Wifi engenamda.
Enkosi kakhulu ngokubonakalisa umdla kwikhaya lethu. Nazi ezinye iinkcukacha ezingakumbi ezenzelwe wena ndide ndifumane ithuba lokuphendula umbuzo wakho.
Izinto zokuqala kuqala.
Ixesha lokungena ngu 14.00. Eli xesha linokuba bhetyebhetye, kodwa kufuneka undazise kwangaphambili ukuba ayilunganga, ukuze sikwazi ukucwangcisa ixesha elinjalo. Ekufikeni kwakho, ndiza kube ndilapho ukuze ndikubonise malunga nendlu kunye nezinto eziluncedo. Yonke imiyalelo yezixhobo zendlu kunye ne-password ye-Wi-Fi iya kunikwa ngaphandle kwalapho.
Njengesipho esivela kuthi, uya kufumana ibhaskithi eyamkelekileyo xa ufika ebandakanya:
Isonka, iminquma, ipakethi yespaghetti kunye nesosi yetumata, ikofu kunye neti okanye nantoni na ekwixesha lonyaka malunga nomhla wakho wokubhukisha. Sijonge ukwenza uhambo lwakho lube mnandi kangangoko, ukuze ungabi naxhala lokuthenga kwangoko nje ukuba ufikile.
Ukuba ufuna ukwenza ukuthenga kwakho ngaphambi kokuba ufike kukho iimarike ezinkulu ezininzi ezisendleleni yakho apha njengoko bendichazile kuluhlu. Iimarike eziphezulu zivula ukusuka kwi-08.00 ukuya kwi-21.00 yonke imihla
Ixesha lokuhamba ukuya eAthene liqikelelwa malunga neyure kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu ngemoto. Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ukutyelela eAthene, ndingancoma ukutyelela i-Acropolis kunye nommandla wePlaka.
Ndingavuya ukukwamkela kwaye ndijonge phambili ekwenzeni unxibelelwano oluthe kratya nje ukuba ndifumene ithuba.
Ngaphakathi kweemitha ezingama-400 kukho ulwandle olukhulu olune "COZY"
ibha yolwandle enekofu, ukutya okulula, kwanesidlo sangokuhlwa esilula..
Kukho iithaveni ezijikelezileyo ( "FROUSSIS'' ,'' KIRA LENI'', etc)
I-Chalkida yidolophu enkulu yesiqithi sase-Euboea esesibini kwisiqithi esikhulu saseGrisi kwaye unokujonga ''amanzi aphambeneyo'' kwi-Evripous Strait.
Ngaphakathi kwe-1 hr drive yi-Archaeological Museum yaseTheves enye yeemyuziyam ezibalulekileyo eGrisi.
Ειμαι μαμα 2 αγοριων ,ζωγραφος, σχεδιαστρια μοδας, ταξιδευτρια στη ζωη ...Μου αρεσει η πεζοπορεια ,τα ταξιδια, οι περιπετειες στη φυση οι μακρινοι ποδαροδρομοι αλλα και τα κοκτεηλς οι φιλοι , η φασαρια το θεατρο...
Ndiza kufumaneka kulo naluphi na ulwazi onokulufuna efowunini.
Inombolo yomthetho: 00000574494
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Skroponeria